Nin ku nasiibsaday Baasweerka Twitter-ka Trump oo Su'aalo la - Axadle | Wararka Africa
Booliiska Netherland (Holland) ayaa su’aalo weydiinayay Victor Gevers oo ah Cilmi baare dhanka ammaanka Internet-ka oo sheegay in uu ku guuleystay gelidda Barta Twitter-ka Madaxwyenaha Mareykanka Donald Trump.
Victor ayaa sheegay in uu tijaabiyay oo uu ku nasiibsaday lambarka sirta ah ee Cinwaanka Twitter-ka Hogaamiyaha Mareykanka Donald Trump balse ay u suuragashay in uu u furmo, sidaas uu gudaha ugu sii galay.
Sheekadaan oo dhacday 22-kii Oktoobar 2020, waxaa loo arkaa in Hogaamiyaha uu ku mashquulsanaa ololaha doorashada & kasoo kabashada Xaaladda xannuunka Covid-19 ee ku dhacay.
Ninkaan oo wajahaya su’aalaha Booliiska maadaama aqoon uu u leeyahay dhanka ammaanka Internet-ka ayaa qirtay in uu galay Cinwaanka Trump isaga oo isticmaalay lambarka sirta ah ee “MAGA2020!”.
Qofka marka uu gacanta ku dhigo ama uu u furmo Cinwaanka waxa uu awoodaa in uu maamulo, isaga oo si gaar ah u sameyn kara:
1-In uu arki karo fariimaha gaarka ah ee qofka loo diro iyo kuwa uu diro.
2-In uu Arki karo Qoraallada wada sheekeysiga ah & macluumaadka kale ee fariin ahaan la isugu diro.
3-In uu heli karo xogta ay kamid yihiin in uu xayiri karo xiriirka saaxiibtinimo shaqsiyaadka (Block).
4-In uu la degi karo dhammaan macluumaadka ku jira cinwaanka u furan sida sawirrada, fariimaha iyo muuqaallada.
Afhayeen u hadlay xafiiska dacwad-oogaha Holland ayaa xaqiijiyay in ay su’aalo weydiiyeen khabiirka, balse aanay wax codsi ah uga imaan dhanka Maraykanka oo ah ninka ka dacwoon kara.
Victor Gevers Barta Trump ee uu galay waxaa rukun ku ah 88.9M oo dad raacay ah (Followers) ah & 51 cinwaan uu isaga ku darsaday (Following), aad ayaa loo adkeeyaa si aan loo jabsan, inkasta oo aan laga shakin ninkaan, maadaama uu toos u geliyay Baasweerka (Password).
Isha: BBC News / Axadle
Atletico Madrid vs Barcelona & Villarreal vs Real Madrid –